Ungachinja sei girazi rePad Mini yako | IPhone nhau
Ungachinja sei girazi rePad Mini yako
Ndiyo imwe yetsaona dzinowanzoitika nemafoni edu nhare: kudonha pasi uye girazi regirazi rinoputsika. Paunenge uri pa iPhone izvi zvinoreva kuti unofanirwa kuchinja hwindo rese, nekuti girazi repamberi neLCD pani zvakanamatidzwa pamwechete, paPads iyi handizvo, zvirinani pamberi pePad Air Air 2. Iyo Apple piritsi yagara iine kumberi girazi rakazvimiririra paLCD skrini, saka tinogona kuchinja chete girazi (iro riine digitizer) tisingatenge kutenga LCD pani, iyo inoderedza zvakanyanya mutengo wekugadzirisa. Kana iri iPad Air 2 iyi haisisiri nyaya uye zvese zvichafanirwa kuchinjwa. Isu ticha tsanangura maitiro ekuchinja girazi repakutanga iPad Mini ine vhidhiyo mauri maungaona matanho ese zvakadzama.
Chii chaunoda kuti uchinje girazi
Zviripachena iwe uchazoda girazi nyowani ine digitizer uye, kana zvichibvira, bhatani rekutanga. Iwe unogona kuwana makristasi asingasanganisi bhatani uye anokuudza iwe kuti ushandise imwe kubva kukristaro yakapfuura, asi ini handikurudzire nekuti inomanikidza maitiro zvakanyanya uye haabhadhare mutengo. Ini ndawana girazi rinotsiva rine bhatani rekutanga rakabatanidzwa uye maturusi anodikanwa angangoita e30 euros en Amazon, asi unogona kuzvitsvaga kuburikidza nezvimwe zvitoro zvepamhepo nekuti pane zvakawanda zvinotsiva zviripo.
Iyo kitsi inosanganisira mukombe wekukweva uyo unobatsira kubvisa girazi rakaputswa, mapurasitiki epurasitiki anokutendera iwe kupatsanura girazi rekare kubva ku iPad furemu uye screwdrivers kuitira kubvisa zvimisikidzo zvezvinhu zvakasiyana zvemukati zvinofanirwa kubviswa kuitira kuti ubvise chinongedzo kubva mugirazi rekare woisa iyo nyowani. Iwe unongoda chete yekuomesa bvudzi kuti ushandise kupisa kugirazi kuitira kuti namira inyorove uye iwe ugone kubvisa girazi rakaputswa rekare. Muvhidhiyo pazasi iwe uchakwanisa kuona iyo yese maitiro eiyo girazi shanduko.
Mushure memaminitsi angangoita makumi mashanu nemashanu iwe unenge uine yako iPad inoshanda zvizere zvakare uye chete kweinenge ma45 euros, zvakati wandei pane izvo zvaizodai zvakakutorera iwe mune chero wepamutemo unogadzirisa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei girazi rePad Mini yako
Mhoroi, ini ndaida kukuudza kuti ndave ndiri kunyorera kwenguva yakareba uye ndichiverenga nhau mazuva ese uye ivo vakakura; Zvakare kukuudza iwe kuti chinyorwa chakanyatsotsanangurwa asi chiri chimwe chinhu chakaomarara kupfuura icho.
Chekutanga poindi, Nyaya yebhatani repamba iyo iyo Kubata kutsva yainayo haisi zano rakanaka nekuti kune zvimwe zvinhu ipapo zvinoita kuti iyo iPad ikiye kana kuvhura kana iwe ukaisa chivharo (icho chine magineti); kana isiri yepakutanga kana isina izvo zvinhu haizoite iro basa. Isu tinotsiva iyo yekutanga neyeiyo yekutanga kuti iite basa iri nemazvo.
Chechipiri, iwo madhiri akaomesesa anodzivisa kurohwa kwakasimba uye kupfuurwa nemota, asi nekuibata zvisirizvo unogona kuisa njodzi yekugadzira kuparara pabhodhi rakakosha (zvimwe zvese zvinoriumba, LCD, yekubata skrini, Wi- Fi ... inogona kutsiva uye kushanda).
Isu tiri basa rehunyanzvi muMadrid uye ini pachangu semumwe wevashandi vanoita kugadzirisa kweiyo iPhone, iPad mini, nezvimwe.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti haisi nyore kugadzirisa kana iwe usina ruzivo uye kuti nekuchengetedza mashoma ma euro pakupedzisira unogona kugadzira dambudziko rinosanganisira mari yakawanda kupfuura yaitarisirwa.
Kugadziriswa kweTactil - Yehunyanzvi sevhisi yefoni, mapiritsi, Windows uye Mac makomputa.
Uye ini ndinotaura kuti ini ndiri kumusoro kweye cap yekushambadzira nevhidhiyo inofara inoburitswazve zvoga. Ehe, iwe unoda mari uye zvese izvo zviripo, asi tsvaga imwe sosi nekuti nerudzi urwu rwechinhu iwe uri kurasikirwa nevaverengi. Hapana munhu anofarira kushambadzira zvisina kujairika paInternet, ndiko kuti, chokwadika.
Iyo yekutanga iPhone ine OLED skrini yaizosvika muna2017
Izvi zvinogoneka iPhone SE zvaizoguma zvinogutsa munhu wese